KWADORO NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA XEROX PHASER 3100 MFP - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Kwadoro ndị ọkwọ ụgbọala maka Xerox Phaser 3100 MFP
Ka anyị mee ndoputa ozugbo - usoro ọ bụla dị n'okpuru dị mma maka ọnọdụ ụfọdụ, ya mere, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na onye ọ bụla, wee họrọzie ngwọta kachasị mma. Na mkpokọta, enwere nhọrọ anọ iji nweta ndị ọkwọ ụgbọala, ma ugbu a, anyị ga-ewebata gị na ha.
Usoro 1: Egwuregwu Onye Ọrụ Egwuregwu
Ndị na-emepụta ihe ndị dị ugbu a na-akwado ngwaahịa ha site na Ịntanetị - karịsịa, site na ọnụ ụzọ ndị e depụtara, ebe software dị mkpa dị. Xerox abụghị otu, n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti ga-abụ usoro kachasị maka inweta ndị ọkwọ ụgbọala.
Mepee ụlọ ọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma ṅaa ntị na nkụnye eji isi ihe na peeji nke. A na-akpọ ụdị anyị chọrọ "Nkwado na ndị ọkwọ ụgbọala", pịa na ya. Mgbe ahụ na nchịkọta na-esonụ nke na-egosi n'okpuru, pịa "Akwụkwọ na Ọkwọ ụgbọala".
Enweghị akụkụ nbudata na sụgharịa CIS nke saịtị Xerox, ya mere jiri ntuziaka dị na peeji na-esonụ ma pịa njikọ njikọ ahụ.
Ọzọ, tinye na ọchụchọ aha ngwaahịa ahụ, onye ọkwọ ụgbọala nke ịchọrọ ibudata. N'ọnọdụ anyị ọ bụ Phaser 3100 MFP - dee aha a na akara. Ihe nchịkọta nhọrọ na menu ga-apụta na ala nke ngọngọ ahụ, pịa ihe achọrọ.
Na windo n'okpuru ntanetị nchọpụta ahụ ga-enwe njikọ maka ihe ndị metụtara arịa a chọrọ. Pịa "Ndị ọkwọ ụgbọala & Downloads".
Mbụ, na ibe nnweta, dezie nsụgharị ndị dị na os os - ndepụta dịịrị maka nke a "Sistem Ọrụ". A na-edozi asụsụ ahụ "Russian", ma maka usoro ụfọdụ karịa Windows 7 na elu, ọ nwere ike ọ gaghị adị.
Ebe ọ bụ na ngwaọrụ a na-atụle bụ nke klas nke MFPs, a na-atụ aro ka ibudata ngwọta zuru ezu a kpọrọ "Ndị ọkwọ ụgbọala Windows na ọrụ": o nwere ihe niile dị mkpa maka ọrụ nke abụọ Phaser 3100. Aha nke akụrụngwa bụ njikọ njikọ, wee pịa ya.
Na peeji na-esote, gụọ nkwekọrịta ikike ma jiri bọtịnụ ahụ "Nabata" iji gaa n'ihu nbudata.
Chere ruo mgbe ebudatara ngwugwu ahụ, jikọọ MFP na kọmpụta, ma ọ bụrụ na i mebeghị ya na mbụ, ma mee ka onye ahụ wụnye ya. Ọ ga-ewepụta oge iji kpochapụ ihe onwunwe. Mgbe ahụ, mgbe ihe niile dị njikere, ọ ga-emeghe "Wizard InstallShield"na windo mbụ nke click "Na-esote".
Ọzọ, ị ga-anakwere nkwekọrịta ahụ - lelee igbe kwesịrị ekwesị wee pịa ọzọ. "Na-esote".
N'ebe a, ị ga-ahọrọ, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala naanị ma ọ̄ bụ ngwanrọ ọzọ - anyị ga-ahapụ gị nhọrọ. Mgbe ịmechara nke a, gaa n'ihu na nwụnye.
Nzọụkwụ ikpeazụ nke njirimara ndị ọrụ chọrọ bụ ịhọrọ ọnọdụ nke faịlụ ndị ọkwọ ụgbọala. Site na ndabara, ndekọ a na-ahọrọ na windo usoro, anyị na-akwado ịhapụ ya. Mana ọ bụrụ na ị nwere obi ike n'ikike gị, ị nwere ike ịhọrọ ndekọ ọ bụla - ime nke a, pịa "Gbanwee", mgbe ị na-ahọpụta ndekọ - "Na-esote".
Onye nhazi ahụ ga - eme ihe ọ bụla ọzọ n'adabereghị.
Usoro 2: Ngwọta site n'aka ndị mmepe nke atọ
Ụdị njirimara nke ịnweta ndị ọkwọ ụgbọala bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya, ma oge kachasị ewee. Mee ka usoro ahụ dị mfe site na iji mmemme nke atọ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị ka DriverPack Solution.
Ihe Ọmụmụ: Otu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na DriverPack Solution
Ọ bụrụ na Ọkwọ ụgbọala DriverPack adịghị adabara gị, nyochaa akụkọ gbasara ihe niile a na-ewu ewu nke klas a dị na ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ya agaghị ekwe omume iji mmemme ndị ọzọ, njirimara ngwaọrụ ngwanrọ bara uru, nke maka MFP a na-atụle:
A ga-eji NJ ahụ e nyere n'elu ya na saịtị pụrụ iche dị ka DevID. Ntuziaka zuru ezu maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na nchọta ihe gụrụ na ihe dị n'okpuru.
Ihe nkuzi: Anyị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ngwaike ngwaike
Ọtụtụ ndị ọrụ nke Windows 7 na ndị ọhụrụ anaghị eche na ị nwere ike wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nke a ma ọ bụ na ngwa ahụ na-eji "Onye njikwa ngwaọrụ". N'ezie, ọtụtụ ndị na-ezo aka na ohere dị otú ahụ na-eleghara anya, ma n'eziokwu, o gosipụtawo irè ya. N'ozuzu, usoro a dị mfe - na-agbaso ntuziaka nke ndị dere anyị.
Gụkwuo: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na ngwaọrụ
N'ịtụle ụzọ ndị dịnụ maka inweta software maka Xerox Phaser 3100 MFP, anyị nwere ike ikwubi na ha anaghị anọchite anya ihe isi ike ọ bụla maka onye ọrụ ikpeazụ. N'isiokwu a na - abịa ná njedebe - anyị nwere olileanya na nduzi anyị baara gị uru.